ko maung Hla, would you please call us to 062- 30424 or 30386 we need your help please if you can. because we want to buyacomputer & connect internet.we will talk to everything on the phone. thanks
စက္ကူလေးခင်းပြီး တင်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ. ဘာလို့ အဲလို လိုင်းလေးတွေ ပေါ်လာတာလဲ. မီးရောင်လေးတွေ ဆက်သွားတာကို ပြောတာ. အဲလိုမျိုး ကျွန်တော် အရမ်းရိုက်တတ်ချင်တာ. အဆင်ပြေရင် ကော်မန့်မှာ နည်းနည်းလောက် Process လေး ရှင်းပြပေးပါလား. ကျေးဇူး တာကောရေ...
ကားမီးတွေကို အတန်းလိုက်ပေါ်ချင်ရင် shutter speed ကို နှေးထားပေးရပါတယ်... အဲဒီ ပုံမှာဆိုရင် shutter speed ကို 16 seconds ထားပြီး ရိုက်ထားပါတယ်... tripod သုံးစရာလိုပါတယ်... ဒါမှမဟုတ် တည်ငြိမ်တဲ့ အရာဝတ္တုတစ်ခုခုပေါ် တင်ပြီး ရိုက်စရာ လိုပါတယ်... ကိုရန်အောင် ခင်ဗျား...
ဘယ်မြို့မှာ နေမှန်းမသိလို့ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာကတော့...
ကွန်ပျူတာ အတွက်ဆိုရင် ကိုယ်တတ်နိုင် ငွေပမာဏနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီးဝယ်ပါ... နောက်ပိုင်းမှာ လဲရတာခက်မယ့် CPU ကို အကောင်းဆုံးသုံးပါ... ဆိုင်မှာ ရတဲ့ အမြင့်ဆုံး CPU နဲ့ သူ့အောက် ဒုတိယ/ တတိယ နေရာမှာ ရှိတဲ့ CPU ဈေး အရမ်းကွာတယ်ဆိုရင် ဒု/တ နေရာမှရှိတဲ့ CPU သုံးပါ... Main Memory (RAM) ကိုလည်း များများထည့်ပါ... နောက်ထပ် ၃-နှစ်လောက်နေမှ ထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုရင် ပစ္စည်း ရှားပါးမှု ကြုံရနိုင်ပါတယ်...
အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက်ကတော့ ...
တယ်လီဖုန်း ကုဒ်နဲ့ မြို့တွေ လိုက်ကြည့်တော့ ၂-မြို့ ၃-မြို့လောက် တွေ့နေရလို့ ဘယ်မြို့ကမှန်းမသိလို့ရလို့ အတွက် ငွေကြေးတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ဖုန်းလိုင်းနဲ့ သုံးရတဲ့ ADSL သုံးခွင့်ရှိတဲ့ မြို့ဆိုရင် ADSL သုံးပါ... ADSL မရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းသုံးနိုင်တဲ့ iPStar သုံးပါ... လို့ အကြံပေးပါရစေ ခင်ဗျာ...
hi mg hla,
how dow you do the pic that is with ray of light. you said put your cam on the paper and snap.
how could that light are in that form.. i m very interested in that pic.
pls tell me how to do that.
thanks , ko seng pha